DataRobot: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအလိုအလျှောက်စက်သင်ယူခြင်းပလက်ဖောင်း | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2017 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2017 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လစာတိုးမြှင့်မှုသည် ၀ န်ထမ်းများ၏အပြောင်းအလဲကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ရေးစရိတ်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကျင့် ၀ တ်ကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားသောဘဏ္analysisာရေးဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မော်ဒယ်မျိုးစုံကိုအပတ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကိုမှတ်မိပြီးအားလုံးစုဆောင်းနိုင်မည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော့်ဒါရိုက်တာကမယုံနိုင်လောက်အောင်လူတစ်ယောက်ပါ၊ ၀ န်ထမ်းရာပေါင်းများစွာအတွက်လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့မဆုံးဖြတ်ခင်ကျွန်တော်ကိုပြန်သွားပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခိုင်းပါ။ ငါပြန်လာသောနံပါတ်များကိုအတူတူပင်ရလဒ်များကိုအတူပြေးလေ၏။
ငါသည်ငါ့ဒါရိုက်တာမော်ဒယ်များမှတဆင့်သွားလာ၏။ သူကကြည့်လိုက်ပြီး“ မင်းဒီအလုပ်ကိုမင်းလုပ်မှာလား” ဟုမေးခဲ့သည်။ “ အင်း” ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၏အနိမ့်ဆုံးလစာကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှစ်ဆတိုးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မော်ဒယ်များကမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ အဲ့ဒီတုန်းက Microsoft Access နဲ့ Excel ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၌ယနေ့ကွန်ပျူတာစွမ်းရည်နှင့်စက်သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါကကျွန်ုပ်သည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအဖြေတစ်ခုရရှိနိုင်ပြီးအမှားအနည်းဆုံးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းကိုတိကျစွာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။ DataRobot ပါ။ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်လိမ့်မည်။
DataRobot သည်အသုံးပြုသူများကိုအလွန်တိကျမှန်ကန်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောမော်ဒယ်များကိုလျင်မြန်စွာအလွယ်တကူတည်ဆောက်နိုင်အောင်မော်ဒယ်လ်ဘဝသက်တမ်းတစ်ခုလုံးကိုအလိုအလျောက်ပေးသည်။ လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သိချင်စိတ်နှင့်ဒေတာများဖြစ်သည် - ကုဒ်နှင့်စက်သင်ယူခြင်းစွမ်းရည်သည်လုံးဝရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်!
DataRobot သည် Data Science သင်တန်းသားများ၊ စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများ၊ ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များ၊ အမှုဆောင်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အိုင်တီပညာရှင်များအတွက်ဒေတာမော်ဒယ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်၊ ဗီဒီယိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပါ
ပစ်မှတ် variable ကိုရွေးချယ်ပါ
DataRobot ၏အဆိုအရသူတို့၏အားသာချက်များတွင် -
ဟုတ်မှန်ရေး - အလိုအလျောက်မြန်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းသည်များသောအားဖြင့်အရည်အသွေးကိုကျဆင်းစေသော်လည်း DataRobot သည်ထိုမျက်နှာစာအားလုံးတွင်ထူးခြားစွာကယ်တင်နိုင်သည်။ DataRobot သည်သင်၏ဒေတာအတွက်အကောင်းဆုံးစက်သင်ယူမှုပုံစံအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု၊ ဒေတာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်များ၊ အသွင်ပြောင်းမှုများ၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ညှိခြင်း parameters များကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေသည်။ ပုံစံတစ်ခုချင်းစီသည်ထူးခြားသည် - တိကျသော Datasets နှင့်ခန့်မှန်းသည့်ပစ်မှတ်များအတွက်ညှိထားသည်။
အရှိန် - DataRobot တွင်စက်သင်ယူမှုမော်ဒယ်များကိုလေ့လာရန်၊ တည်ဆောက်ရန်နှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်ရာနှင့်ချီသောသို့မဟုတ်အစွမ်းထက်သောဆာဗာထောင်ပေါင်းများစွာအထိကြီးမားသောအပြိုင်မော်ဒယ်လ်အင်ဂျင်ပါရှိသည်။ ကြီးမားသောဒေတာအစု? အချက်အလက်ကျယ် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ မော်ဒယ်လ်၏အမြန်နှုန်းနှင့်အရွယ်ပမာဏကို DataRobot ၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းရှိကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကသာကန့်သတ်ထားသည်။ ဒီစွမ်းအားတွေအားလုံးကိုလပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဟာနာရီပိုင်းအတွင်းမှာပြီးဆုံးသွားပြီ။
ဖြေလျှော့-of အသုံးပြုမှု - အလိုအလျောက် Web-based interface သည်မည်သူမဆိုကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်စက်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံရှိပါစေ၊ အလွန်အစွမ်းထက်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည် DataRobot ကိုအလုပ်အားလုံးလုပ်ခွင့်ပြုသည်သို့မဟုတ်ဆွဲယူနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မော်ဒယ်များကိုပလက်ဖောင်းမှအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Model X-Ray နှင့် Feature Impact တို့ကဲ့သို့သောပါ ၀ င်သည့်မြင်ကွင်းများသည်သင်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုနားလည်မှုအသစ်တစ်ခုကိုပေးစွမ်းသည်။
ဂေဟစနစ် - ကြီးထွားလာသောစက်သင်ကြားရေးစနစ်၏ဂေဟစနစ်နှင့်အညီနေထိုင်ခြင်းသည်တစ်ခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။ DataRobot သည် R, Python, H20, Spark နှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များမှကွဲပြားခြားနားပြီးအကောင်းဆုံး -In-class algorithms အမျိုးမျိုးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်စိန်ခေါ်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုပေးသည်။ ရိုးရိုး Start ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအသုံးပြုသူများသည်သူတို့တစ်ခါမှမသုံးဖူးသောနည်းများကိုအသုံးချနိုင်သည် (သို့) အကျွမ်းတဝင်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
Rapid Deployment - အကောင်းဆုံးသောကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုပုံစံများသည်စီးပွားရေးအတွင်းလျင်မြန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးမရှိပါ။ DataRobot နှင့်အတူဟောကိန်းများအတွက်မော်ဒယ်များကိုမောက်စ်ကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် DataRobot မှတည်ဆောက်ခဲ့သောမော်ဒယ်တိုင်းသည် REST API အဆုံးမှတ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးများအတွင်းပေါင်းစည်းရန်လေပြင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ အမှတ်ပေးကုဒ်ရေးရန်နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုကိုင်တွယ်ရန်လများကိုစောင့်ဆိုင်းမည့်အစားယခုအခါအဖွဲ့အစည်းများသည်စက်ပစ္စည်းသင်ယူခြင်းမှစီးပွားရေးတန်ဖိုးကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းရယူနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းအဆင့် - ယခုစက်သင်ယူမှုသည်တိုးပွားလာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရေအတွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လာပါက၎င်းကိုလုံခြုံရေးအတွက်၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်စီးပွားရေးဆက်မပြတ်စေရန်အနည်းဆုံးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ အမှန်မှာ၊ မော်ဒယ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းအတွက်ပလက်ဖောင်းသည်ခိုင်မာသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိနည်းပညာများ၏ဂေဟစနစ်နှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Tags: aiဉာဏ်ရည်တုအလိုအလျောက်စက်သင်ယူမှုဒေတာများကိုစားသုံးမိခြင်းဒေတာ preprocessingဒေတာသိပ္ပံဒေတာ visualizationsဒေတာစက်ရုပ်ဒေတာအစုအင်္ဂါရပ်သက်ရောက်မှုh2oကြီးမားသောဒေတာအစုစက်သင်ယူမှုမော်ဒယ်က x-Rayမော်ဒယ်အင်ဂျင်ခန့်မှန်းPython ကိုrမီးဖွါး
Facebook ကိုစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက်ဟိုတယ်များအသုံးပြုသောမဟာဗျူဟာ ၆